I-MomentFeed: Izixazululo Zokukhangisa Ezisendaweni Zokusesha Nezenhlalo | Martech Zone
Uma ungumakethanga endaweni yokudlela, noma ngaphezulu kwama-franchisees, noma uchungechunge lokuthengisa, awukwazi ukusebenza kuzo zonke izimakethe nezindawo eziphakathi ukukhuthaza indawo ngayinye ngaphandle kohlobo oluthile lohlelo. Umkhiqizo wakho ubonakala kakhulu ekusesheni kwasendaweni, ungaboni ukuzibandakanya kwamakhasimende endawo, awunawo amathuluzi wokwenza izikhangiso ezifanele endaweni, futhi imvamisa awuphathi ubukhona bezindaba zenhlalo eziphelele.
Hlanganisa umzamo nezinguquko ezithile ezibalulekile zokuziphatha kwabathengi:
Abathengi abangama-80% bafuna izikhangiso ezenziwe ngokwezifiso endaweni yabo
Kunama-akhawunti asebenzayo angaphezu kwama-1.7 billion asebenzayo
Abathengi abangama-90% bathi ukubuyekezwa okuku-inthanethi kuthinta izinqumo zokuthenga
Abathengi abangama-88% basebenzisa usesho lweselula ukuthola imikhiqizo nezinsizakalo eziseduze
Kuyisiphepho esifanele. Udinga ukuvezwa kwesifunda okwenzelwe ikhasimende lendawo. Ngemikhiqizo emikhulu yezinketho zikazwelonke nezama-franchise, ukulahleka emiphumeleni yosesho lwasendaweni bekudala kuyinkinga ngenxa yenani lendawo nedatha yebhizinisi abayidingayo ukuyigcina. Faka kulokhu ukuthi izimpawu zomphakathi, njengezilinganiso nokubuyekezwa, zinomthelela emiphumeleni yokucinga, kanye nenani lolwazi oludinga ukubhekelwa ibhizinisi ngamakhulu noma izinkulungwane zezindawo kungabonakala kungenakwenzeka.
Ukuxazulula lokhu, amabhizinisi amaningi amakhulu nezinhlangano zawo zezindaba, njenge-Applebee, iJamba Juice, neThe Coffee Bean, baphendukele ku MomentFeed, ukwenza kube lula ukuphatha nokwandisa idatha yezitolo yendawo njengamakheli, amahora wokusebenza, ukubuyekezwa nezithombe.
Ipulatifomu i-MomentFeed ixhumanisa imikhiqizo yezindawo eziningi nabathengi bendawo emiphakathini abayisebenzelayo, ivumela amabhizinisi ukuthi ahambise ukumaketha okufanele, okwenziwe ngezinga ezinkulungwaneni zezindawo.
Ipulatifomu Yezentengiso Yasendaweni ye-MomentFeed
Ipulatifomu ye-MomentFeed inezisombululo zokusesha nokutholakala, imithombo yezokuxhumana, imidiya ekhokhelwayo kanye nesipiliyoni samakhasimende.
Usesho Nokutholwa - I-MomentFeed yakha konke ukuxhumana okubucayi kwe-SEO okwenzeka kuwe ngokuzenzakalela, kwakha futhi kugcine imvelo ekhulisa ukusesha kwakho kwasendaweni futhi inikeze ukuthembeka ezindaweni zakho kuwo wonke amapulatifomu.
Imidiya ekhokhelwayo - shintsha umkhankaso owodwa kazwelonke ube yimikhankaso ehlukile eqondene nendawo ngayinye kalula ngokuchofoza okumbalwa okukuvumela ukuthi usebenzise okuqukethwe kuwo wonke amanethiwekhi wokuxhumana nomphakathi.
Ukuphathwa Kwezokuxhumana Komphakathi - ukushicilela ngaphakathi nohlelo eziteshini ezifana ne-Facebook, Instagram, Foursquare, Google+ ne-Twitter. Njengezithombe bese uphendula kumakhasimende esikalini. Faka okuqukethwe okunamandla ukudala ukuhlobana kwasendaweni nokwabelana ngokuqukethwe.
Ukutholakala kwamakhasimende - izilinganiso ezihlangene nokubuyekezwa okuvela ku-Facebook, Foursquare, Google, ne-Yelp okuvumela ama-brand ukuthi aqaphe kahle futhi aphendule kumakhasimende. Abasebenzisi bangadonsa izibuyekezo kusuka ezindaweni ezingashadile, bahlele ngezilinganiso zezinkanyezi, futhi baphendule ngawodwana noma eqenjini lababeka amazwana.
IMomentFeed imemezele ukuthi ithuthukisa amakhono ayo njengokugunyazwa I-Google Bhizinisi Lami Uzakwethu we-API. Ngalobu budlelwano, i-MomentFeed ingasiza kangcono nemikhiqizo yezwe ukuthi ithuthukise imiphumela yabo yosesho lwasendaweni nemikhankaso ye-Google Ads ngokuhlanganisa ukufakwa kuhlu kwe-Google Bhizinisi Lami namandla akhona we-geo-optimization.
I-Google Bhizinisi Lami (GMB) ivumela amabhizinisi ukuthi akhe futhi aphathe ukufakwa kuhlu kwamahhala kwebhizinisi kunethiwekhi ye-Google, ukuze abathengi bakwazi ukuthola kalula izindawo zokugcina lapho benza usesho ku-Google Search naku-Maps. Uma kuhlanganiswa namandla we-geo-optimization akhona we-MomentFeed, amaklayenti angaqinisekisa ukunemba okukhulu, ukungaguquguquki nokuqukethwe kwendawo komuntu ngamunye, esitolo sendawo lapho, ngokwesibonelo, abathengi basesha amagama afana nelithi “ikhofi,” “isitolo sesangweji” noma “i-ATM eduze kwami. ”
I-MomentFeed nayo iyi- Uzakwethu we-Instagram, Izikwele ze Business Partner kanye nelungu lohlelo lwe-Facebook Marketing Partner (FMP)
Tags: chainFacebookukubuyekezwa kwe-facebookezineukubuyekezwa kwezinhlangothi ezinefranchisegoogle ibhizinisi lamiizibuyekezo ze-googleGoogle +instagramukusesha kwendawoimikhankaso yokusesha yendawoseo sendawomzuzuindawo eningiukuphathwa kwezokuxhumana nabantuTwitterYelpukubuyekezwa kwe-yelp